Habeen ka hor Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxaa uu soo saaray Wareegto uu xilka uga qaadayay Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug,hayeeshee saacado kadib xilka qaadistaas uu kasoo horjeestay.
Cabdi Rashiid Xaashi Cartan oo shir jaraa’id ku qabtay Gaalkacyo ayaa sheegay in warqada xilka qaadista aan lagala tashan,isla markaana Baraha Bulshada uu ku arkay warqada xilka qaadista.
Waxa uu sheegay in Waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ee Gobolka Mudug uu la sameeyay wadatashi sidaas daraadeedna aan xilligaan jirin wax xilka qaadis ah.
Sidoo kale isaga oo ka hadlayay xiriirka dowladda Federaalka iyo Maamulka Galmudug ayuu sheegay in Galmudug aysan xiriirka u jari Karin Dowladda Federaalka maadaama ay tahay Xubin ka mid ah dowladda.
Hadalka Gudoomiyii xilka laga qaaday ee Gobolka Mudug ayaa kusoo aadaya xilli xiisad ka dhalatay xilka qaadistii Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ay weli ka taagan tahay Magalada Baladweyne,kadib markii uu diiday xilka qaadistaas.